နော်ခမ်းဂယက် ရှမ်းပြည် ကို ရိုက် ၊ လာရှိုး မှာ တရုတ် အိမ် တွေ ကို မီးကွင်းပြစ်မယ့် သတင်းတွေ ထွက် | Freedom News Group
နော်ခမ်းဂယက် ရှမ်းပြည် ကို ရိုက် ၊ လာရှိုး မှာ တရုတ် အိမ် တွေ ကို မီးကွင်းပြစ်မယ့် သတင်းတွေ ထွက်
by FNG on March 2, 2013	တရုတ် အစိုးရ က မြန်မာ နိုင်ငံ ရှမ်း ပြည်နယ် လာရှိုးဇာတိ ဖွား ပြည်သူ့စစ် ခေါင်းဆောင် နဲ့ 
တရုတ် နိုင်ငံ သား တွေ ၊ နိုင်ငံရေး တက်ကြွ လှုပ်ရှား သူ တွေ ၊ လူ့အခွင့် အရေး အဖွဲ့တွေ က ဝေဖန်
ထောက် ပြ မှု တွေ နဲ့ပွက် လော ညံ နေ ပြီး နော်ခမ်း ရဲ့ဇာတိ လားရှိုး မှာ တော့ တရုတ် ရဲ့အကြင်
နာ တရား ကင်း မဲ့ စွာ မြန်မာ နိုင်ငံ သား တစ်ယောက် ကို သတ် ဖြတ် ခဲ့ မှု နဲ့ပတ်သက် ပြီး လက်
တုံ့ပြန် မယ် လို့ခြိမ်းခြောက် မှု တွေ ဒီနေ့ မနက် အစောပိုင်း မှာ စတင် ပေါ် ထွက် ခဲ့ ပါတယ်။
လားရှိုး မြို့ ခံ တစ်ဦး ကို FNG က ဆက်သွယ် မေးမြန်း ကြည့် တဲ့ အခါ ” ဘိန်းဓမြ ပဲ မှန်တယ်။ တရုတ်
တွေ ကို သတ် လို့အား ရတယ်။ နော်ခမ်း က သူ ရဲကောင်း ပဲ၊ ဒါပေမယ့် သူ သေခါ နီး မှာ လူမြင်ကွင်း
ရှေ့ မှာ လမ်းလျှောက် ပြခဲ့တာ မတရား ဘူး ၊ တရုတ် တွေ ကို လက်စား ချေရမယ် ၊ ဒီနေ့ည မီးကွင်း
ပြစ်မယ် လို့သတင်း တွေ ထွက် နေတယ် လို့လာရှိုး မြို့က လက်ဖက် စိုက်ပျိုး သူ တစ်ဦး က FNG
ကို ပြောတာ ပါ။
မဲခေါင်မြစ် တွင်း မှာ တရုတ် သင်္ဘော သား ၁၃ ဦး ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် အတွင်း မှာ သတ်ဖြတ် မှု နဲ့ပတ်သက်
ပြီး မြန်မာ ဘိန်းရာဇာ နော်ခမ်း ကို တရုတ် အစိုး ရ က ၂၀၁၂ ခုနှစ် အတွင်း မှာ ဖမ်းဆီး ပြီး မနေ့ က
လူ့အခွင့် အရေး နဲ့လျှော် ညီ မှု မရှိ ပဲ သေဒဏ် ပေး ခဲ့ ပါတယ်။
တရုတ် ရုပ် သံ တွေ မှာ တွေ့ရ မှာပါ။
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	From: သတင်း, ပြည်တွင်းသတင်း	← ခေါင်းဆောင်တွေ သတ္တိရှိပါ
ဓာတ်ငွေ့ စက်ရုံ စီးနင်းမှု မှာ ကြိုးကိုင် ခဲ့ တဲ့ စစ်သွေးကြွ ခေါင်းဆောင် ကို ချဒ်တပ် ဖွဲ့တွေ သုတ်သင် နိုင်ခဲ့ →
March 21, 2013	m	#
March 5, 2013	Ayethawda	#
March 4, 2013	Htun Naing Win	#
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ညီညွှတ်ကြပါဗျာ ကျနော်တို့ ဆင်းရဲနေလို့ ဒီလိုလုပ်တာခံရတာ ကိုလိုနီခေတ်သစ်နယ်ချဲ့တရုတ်တွေ အတ္တသမားတရုတ်တွေအမြန်ကျရှုံးပါစေ
March 4, 2013	naing min	#
March 3, 2013	Tin Maung Shwe	#
don’t make revenge, but request for justic.
March 3, 2013	aung	#
ချ……အားပေးတယ်…….ငါတို့ လူမျိုးကိုစော်ကားတဲ့ ….လူမျိုးကိုအကုန်သတ်ပစ်…..လကိစားပြန်ခြေရမယ်…..
March 2, 2013	Jatawng Naw	#
Some drug lords are sitting at pyithu hlutthaw and living withagreat confords withastrong security of burma thatmadaw while their former big friend Sai Naw Hkam group is executed at communist land China.. What isafriendship ?? What is the on going Democracy of Thein Sein and Myanmar?? What is the fairness of Burma Government body???
March 2, 2013	Comments are closed.
Total Visitors:Since 16 December 2008	10,728,504 hits